Global Voices teny Malagasy » Nolavin’i Hong Kong ny visa an’ireo tonian-dahatsoratry Financial Times izay nanatontosa valan-dresaky ny mpomba ny fahaleovantena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Oktobra 2018 9:59 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Politika
Manda sivily mandala ny zon'olombelona nitarika ny hetsi-panoherana fandavàna visa tao amin'ny Tranoben'ny Fifindra-monina ao Wan Chai ny 6 Oktobra. Sary nalain'i Tom Grundy avy amin'ny HKFP. The Civil Human Rights Front led a protest against visa denial decision at the Immigration Tower in Wan Chai on October 6. Photo taken by Tom Grundy from HKFP.
Ity lahatsoratra ity dia famintinana ny tatitra nivoaka tamin'ny 5-6 Oktobra 2018 tao amin'ny Hong Kong Free Press  (HKFP). Mifototra amin'ny fifanaraham-piaraha-miasa ny famoahana azy indray.
Nandà ny hanavao ny visa ho an'ny filoha lefitry ny klioban'ny gazety vahiny, Victor Mallet, sady tonian-dahatsoratry ny Financial Times ao Azia ihany koa i Hong Kong. Mpitondra tenin'ny Financial Times nilaza tamin'ny HKFP hoe.
Ity no voalohany nahitanay toe-draharaha tahaka izao ao Hong Kong, ary tsy nomena anay ny anton'ny fandavàna.
Hong Kong dia fari-pitantanana manokana  ao Shina izay manana fahalalahana ara-toekarena sy manokana kokoa noho ny tanibe, natsangana araka ny foto-kevitra “Firenena Iray, Rafitra Roa.” Tato anatin'ny taona vitsy dia nanery an'i Hong Kong mba hankatoa lalàna vaovao manamafy ny ” Firenena Iray” ho ampahany amin'ny fitsipika i Beijing.
Nitarika lahateny nataon'ilay mpikatroka mpanohana ny fahaleovan-tena, Andy Chan ao amin'ny FCC tamin'ny volana Aogositra  i Mallet, izay noezahan'ny biraon'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny ao Hong Kong nosakanana.
Lehibe mpanatanteraka teo aloha, Leung Chun-ying nampitaha ny hetsika amin'ny fanomezana sehatra ho an'ny mpampihorohoro . Nanome tsiny ny FCC izy noho ny fanitsahana ilay antsoina hoe “tsipika mena” ary nilaza fa maro no maniry ny hanazavan'ny klioba ny antony tsy namelan'ny governemanta ny hafa hiditra ao amin'ny toeran'izy ireo ao amin'ny Foibe.
Natao ny hetsika taorian'ny filazan'ny polisy ny fandraràna ny Antoko Nasionaly Hong Kong izay noraràn'ny governemanta tamin'ny faran'ny volana lasa teo. 
Nampian'ny FCC fa tena manahy mafy ny fanapahan-kevitry ny governemanta izy. Niantso ny manampahefana izy hanafoana ny fanapahan-keviny tamin'ny filazana fa tsy ampy fanazavana azo ekena ilay izy. Hoy izy tao anaty fanambarana:
Ny FCC dia manantena fanazavana feno avy amin'ireo manampahefana ao Hong Kong amin'ity hetsika mahagaga ity, izay tsy fahita firy, raha mbola tsy nisy teo aloha.
Mpitondratenin'ny New York Times, Eileen Murphy, nanipika fa “mampanahy mafy” ny fanaovana politika momba ny fizotry ny fizarana visa ao amin'ny faritra.
Sahiran-tsaina izahay fa ny governemanta ao Hong Kong dia mety hiomana handroaka mpiara-miasa hajaina ao amin'ny Financial Times izay efa nolavina tsy misy fanazavana ny fangatahana fanavaozana visa mahazatra, ka mitady fanazavana avy amin'ny manampahefana izahay … nahasarika orinasa sy sampam-baovao iraisam-pirenena ho any an-tanàna ny fanoloran-tenan'i Hong Kong amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fitsipi-dalàna, ao anatin'izany ny The New York Times.
‘Fanenjehana amin'ny endrika Beijing’
Nilaza ny mpitondra tenin'ny Biraon'ny Commonwealth sy ny Fanjakana-Mitambatra misahana ny Raharaham-bahiny fa “sahiran-tsaina” noho ny fandàvana ny fanavaozana ny visa-n'i Mallet:
Nanontany ny governemantan'i Hong Kong izahay mba hanome fanazavana maika. Ivon'ny fomba fiainany ny halehiben'ny fahaleovantenan'i Hong Kong sy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazetiny, ka tokony hohajaina tanteraka.
Nanambara tamin'ny HKFP ny mpitondra tenin'ny Kaonsilà Amerikana hoe:
Tena manahiran-tsaina ny fandavana ny fanavaozana ny visa momba ny asa ho an'ny mpanao gazetin'ny Financial Times sady Filoha lefitry ny vahiny Klioban'ny mpitati-baovao, Victor Malettena … Manakorontana tokoa ity fanapahan-kevitra ity satria mampiseho ny olana atrehin'ny mpanao gazety iraisam-pirenena ao amin'ny tanibe ary hita tsy mifanaraka amin'ny fitsipika napetraka ao amin'ny Lalàna Fototra.
Fikambanana tsy miankina ao an-toerana sy iraisam-pirenena maromaro no nanohitra ny fanapahan-kevitry ny governemanta. Ny Asabotsy 6 Oktobra, nanao fihetsiketsehana tao ivelan'ny Sampan-draharahan'ny fifindra-monina ny vondrona FTMF =ONG ao Hong Kong, Civic Human Right Front ho fanoherana ny fanapahan-kevitra tamin'ilay visa.
Maya Wang, mpikaroka ao amin'ny FTMF =ONG Human Rights Watch, namariparitra ny fihetsika ho manafintohina sy sambany nisy toy izany:
Ny fandavan'ny manampahefana Hong Kong hanavao visa ho an'ny mpanao gazety iray izay tsy nanao afa-tsy ny asany—tsy misy fanazavana— dia mampiseho fanenjehana ireo mpitsikera araka ny fanaon'i Beijing … mampiseho fitontogan'ny zon'olombelona ao Hong Kong izany: fa manaraka ny dian'i Beijing amin'ny fomba masiaka amin'ireo izay manana fomba fijery tsy tian'ny manampahefana ny governemantan'i Hong Kong.
Nilaza ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety ao Hong Kong fa tafintohina sy tezitra tamin'ny zava-nitranga: “Mampieritreritra ny olona izany raha toa ka valifaty.” Nampiany koa fa ny fandavana visa dia hanimba tanteraka ny satan'i Hong Kong amin'ny maha tanàna maneran-tany azy:
Ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety no fototry ny fahombiazan'i Hong Kong. Ny fandàvana ny visa an'i [Mallet's] dia hanimba kokoa ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana miteny, ary hanimba tanteraka ny satan'i Hong Kong amin'ny tanàna iraisam-pirenena.
Nandrisika ny manampahefana mba hiala amin'ny fanapahan-keviny ny mpanara-maso ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, Reporters Without Borders (RSF):
Mazava ho azy fa endrika fanenjehana noho ny fandraisany anjara amin'ny lahateny ho an'ny daholobe nomanin'ny FCCHK tamin'ny volana Aogositra izany, izay nahatezitra an'i Beijing tamin'ny fanasongadinana ilay mpikatroka mpanohana ny fahaleovantenan'i Hong Kong. Ny hetsika toy izany dia porofo iray hafa fa manitatra ny politikan'ny fampitahorana ireo mpanao gazety avy any ivelany ao amin'ny faritanin'i Hong Kong ny manampahefana Shinoa.
Handeha ho any Geneva amin'ny herinandro ho avy ireo solontenan'ny Fivondronan'ny UPR ao Hong Kong – ahitana fikambanana tsy miankina miisa 45 – mba handray fitenenana amin'ny fanombohan'ny alohan'ny fivoriana fanao isan-taona an'ny Firenena Mikambana ary hiresaka ny raharaha miaraka amin'ireo solontena avy amin'ny fanjakana mpikambana hafa. Demosisto, mpikambana ao amin'ny Fivondronana nilaza tamin'ny fanambarana hoe:
Mila mandray fepetra dieny izao ny manampahefana ao Beijing manoloana ny fanapahan-keviny hanafoana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao Hong Kong, satria hodinihan'ireo firenena mpikambana hafa mandritra ny fivoriana ho avy ny toeran'ny zon'olombelona ao aminy, ary adidiny amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Firenena Mikambana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/10/127376/
 fari-pitantanana manokana: https://en.wikipedia.org/wiki/Special_administrative_regions_of_China
 Andy Chan ao amin'ny FCC tamin'ny volana Aogositra: https://www.hongkongfp.com/2018/08/14/video-full-activist-andy-chan-says-hong-kong-independence-path-democracy-press-club-talk/
 nampitaha ny hetsika amin'ny fanomezana sehatra ho an'ny mpampihorohoro : https://globalvoices.org/2018/08/11/condemnation-of-independence-activist-draws-a-red-line-for-hong-kongs-press-freedom/
 noraràn'ny governemanta tamin'ny faran'ny volana lasa teo.: https://www.hongkongfp.com/2018/09/24/breaking-pro-independence-party-officially-banned-hong-kong-govt-historic-move-restricting-freedom-assembly/